သင်ကိုယ်တိုင်၏ စာတန်ဆန်သော စိတ်သဘောထားနှင့် သဘာဝတို့ကို မည်သို့မည်ပုံနားလည်ရန်နှင့် ပတ်သက်သည့် နှုတ်ကပတ်တော်များ | အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် အသင်းတော်
၇၀။ လူတိုင်းသည် မိမိ၏ နှုတ်နှင့် အပြုအမူအားဖြင့် မိမိ၏ အသွင်သဏ္ဍာန်အမှန်ကို ဖေါ်ပြတတ်ကြ သည်။ ယင်းအသွင်သဏ္ဍာန်အမှန်သည် သူတို့၏ သဘာဝဖြစ်သည်။ သင်သည် ဝေ့လည် ကြောင်ပတ် ပြောတတ်သူ ဖြစ်လျှင် သင့်တွင် ကောက်ကျစ်သော သဘာဝ ရှိသည်။ သင့်သဘာဝ ကောက်ကျစ် စဉ်းလဲလျှင် သင်သည် အလွန်ပါးနပ်၍ လှည့်ဖြားတတ်ကာ လူတကာကို လွယ်ကူစွာ လှည့်စားနိုင်သည်။ သင့်သဘာဝ အလွန် ယုတ်မာလျှင် သင့်စကားသည် နားထောင်ရ ချိုကောင်း ချိုနိုင်သော်လည်း၊ သင့်အပြုအမူများသည် ယုတ်မာမှုကို ဖုံးကွယ်နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ သင်၏သဘာဝသည် အလွန်ပျင်းရိခြင်း ရှိလျှင် သင်၏ ဝတ်ကျေ တမ်းကျေ လုပ်ဆောင်တတ်ခြင်းနှင့် ပျင်းရိခြင်း၏ အကျိုးဆက်ကို တာဝန်မယူလိုသောကြောင့် ရှောင်လွဲ သည့် စကားများကို ပြောမည်။ အလုပ်နှေးကွေး၍ ဝတ်ကျေတမ်းကျေ လုပ်တတ်ကာ သမ္မာတရားကို ဖုံးကွယ်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်လိမ့်မည်။ သင့်သဘာဝသည် တည်ကြည်လေးနက်မှု ရှိလျှင် သင်ပြောသော စကားသည် အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့်ရှိကာ သင်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များလည်း သမ္မာတရားနှင့် ကိုက်ညီလိမ့်မည်။ သင့်သဘာဝသည် အလွန်သစ္စာရှိလျှင် သင့်စကား ရိုးသား၍ လုပ်ဆောင်ချက် လက်တွေ့ ကျကာ သင့်သခင်သည် သင့်အား လုံးဝယုံကြည် စိတ်ချလိမ့်မည်။ သင့်သဘာဝသည် လောဘရမ္မက် ကြီးလွန်း ၍ ငွေတပ်မက်ခြင်းရှိလျှင် သင့်စိတ်နှလုံးတွင် ထိုအရာများ ပြည့်နက်နေသဖြင့် လူတကာ၏ ရွံရှာမုန်းတီး၍ မေ့ပျောက်နိုင်ရန် ခက်ခဲသော ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်ပြားမှုများကို သင်အမှတ်တမဲ့ ကျူးလွန်တတ်သည်။
နှုတ်ကပတ်တော်သည် လူ့ဇာတိ၌ ပေါ်လာ၏ စာအုပ်ထဲရှိ “ဆိုးရွားလှသော ပြဿနာ— သစ္စာဖောက်ခြင်း (၁)” မှ
၇၁။ အကယ်၍ လူတို့သည် ၎င်းတို့ကိုယ်ကိုယ် နားလည်ရမည်ဆိုပါက သူတို့သည် သူတို့၏ စစ်မှန်သော အခြေအနေများကို နားလည်ရမည်။ မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်အခြေအနေကို နားလည်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော အရေးကြီးဆုံးကဏ္ဍမှာ မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်အတွေးများနှင့် စိတ်ကူးများကို နားလည်သဘောပေါက်မှု ရှိရန်ပင် ဖြစ်သည်။ အချိန်ကာလတိုင်းတွင် လူတို့၏ အတွေးများသည် အဓိကကျသော အရာတစ်ခု၏ ထိန်းချုပ်ခြင်းကို ခံထားရပြီးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် သင်၏အတွေးများအပေါ် ထိန်းချုပ်မှုကို ရရှိနိုင်ပါက သင်သည် ၎င်းတို့ နောက်ကွယ်၌ရှိသော အရာများအပေါ် ထိန်းချုပ်မှုကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လူတို့သည် မိမိတို့၏ အတွေးများနှင့် စိတ်ကူးများကို မထိန်းချုပ်နိုင်ကြသော်လည်း၊ ဤအတွေးများနှင့် စိတ်ကူးများ မည်သည့်အရပ်မှ လာသည်၊ ၎င်းတို့ နောက်ကွယ်တွင် မည်သည့်အကြောင်းရင်းများ ရှိသည်၊ ဤအတွေးများနှင့်စိတ်ကူးများ မည်သို့ ထွက်ပေါ်သည်၊ မည်သည့်အရာက ၎င်းတို့ကို ထိန်းချုပ်သည်ဆိုသည်နှင့် ၎င်းတို့၏ သဘာဝက မည်သည့်အရာဖြစ်သည်တို့ကို ၎င်းတို့ သိဖို့လိုအပ်သည်။ သင်၏ စိတ်သဘောထား ပြောင်းလဲပြီးနောက်တွင်၊ သင်၏ ပြောင်းလဲသော အစိတ်အပိုင်းများက ထွက်ပေါ်စေခဲ့သည့် သင်၏ အတွေးများနှင့် စိတ်ကူးများ၊ သင်၏ စိတ်နှလုံးက လိုက်လံရှာဖွေသည့် ဆန္ဒများနှင့် သင် လိုက်စားနေသည့် အမှုအရာများအပေါ် သင်၏ ရှုထောင့်အမြင်များသည် ကွဲပြားလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ မပြောင်းလဲသော အစိတ်အပိုင်းများမှ ပေါ်ပေါက်သည့် ုအတွေးများနှင့် စိတ်ကူးများ၊ သင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားမလည်သော အရာများနှင့် သမ္မတရားအပေါ် အတွေ့အကြုံများဖြင့် သင် အစားမထိုးရသေးသည့် အရာများတို့သည် ညစ်ညူးပြီး ညစ်ပတ်ကာ အကျည်းတန်ပေသည်။ ဘုရားသခင်၏အမှုကို နှစ်ပေါင်းအချို့ တွေ့ကြုံခံစားထားပြီးဖြစ်သော ယနေ့ခေတ် လူတို့၌ ဤကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသိတရားနှင့် နားလည်သဘောပေါက်မှုအချို့ ရှိသည်။ ဘုရားသခင်၏အမှုကို အချိန်ကာလတစ်ခဏသာ တွေ့ကြုံခံစားထားရသော သူများကမူ ဤကိစ္စရပ်များကို နားမလည်ကြသေးပေ၊ ထိုသူတို့သည် မရှင်းကြသေးပေ။ ထိုသူတို့သည် မိမိတို့၏ ပျော့ကွက်မှာ အဘယ်နေရာ၌ရှိသည်၊ သို့မဟုတ် မည်သည့်နယ်ပယ်များတွင် မိမိတို့ကျရှုံးရန်မှာ လွယ်ကူသည်ကို မသိကြ။ မိမိသည် မည်သို့သောလူအမျိုးအစားဖြစ်သည်ကို လက်ရှိတွင် သင်တို့မသိကြ၊ ထို့ပြင် သင်သည် မည်သို့သောလူအမျိုးအစားဖြစ်သည်ကို အခြားလူများက အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ မြင်နိုင်ကြသော်လည်း သင်ကမူ ထိုအရာကို သတိမပြုမိနိုင်ပေ။ သင်သည် သင်၏ သာမန်အတွေးများနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်းစွာ မခွဲခြားနိုင်၊ ထို့ပြင် ဤကိစ္စရပ်များ၏ အနှစ်သာရမှာ အဘယ်အရာဖြစ်သည့်အကြောင်း ရှင်းလင်းသော နားလည်မှု သင်၌မရှိချေ။ ရှုထောင့်တစ်ခုကို သင် ပိုမိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း သိနားလည်လေလေ၊ ထိုရှုထောင့်တွင် သင် ပိုမို ပြောင်းလဲလေလေ ဖြစ်မည်၊ ထိုသို့ဖြင့်၊ သင် လုပ်ဆောင်မည့်အရာများသည် သမ္မာတရားနှင့် ကိုက်ညီလိမ့်မည်၊ ဘုရားသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်များကို သင် ဖြည့်ဆည်းနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး၊ သင်သည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့် ပိုမို နီးစပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်သာ ရလဒ်များကို သင် ရရှိနိုင်သည်။
ခရစ်တော်၏ပြောဆိုချက် မှတ်တမ်းများ စာအုပ်ထဲရှိ “ဘုရားသခင်အပေါ် အမြဲတစေ တောင်းဆိုချက်များ ရှိကြသောလူများမှာ ဆင်ခြင်တုံတရား အနည်းဆုံးလူများ ဖြစ်သည်” မှ
၇၂။ လူသားသဘာဝကို သင် မည်သို့ နားလည်ပါသနည်း။ သင်၏ သဘာဝကို နားလည်ခြင်းသည် အမှန်တကယ်တွင် သင့်ဝိညာဉ်၏ အတိမ်အနက်ကို စိစစ်ခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရ၏၊ ယင်းသည် သင့်ဘဝ၌ ရှိသည့်အရာ နှင့် ပတ်သက်သည်။ ယင်းသည် စာတန်၏ ဆင်ခြင်တွေးခေါ်မှုစနစ်ဖြစ်ပြီး သင် အမြဲ အသက်ရှင်နေခဲ့သည့် စာတန်၏ ရှုထောင့်အမြင်များစွာ ဖြစ်လေသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ယင်းသည် သင် အသက်ရှင်နေခဲ့သည့် စာတန်၏ အသက်တာ ဖြစ်၏။ သင့်ဝိညာဉ်၏ နက်ရှိုင်းသော အတွင်းနေရာက အစိတ်အပိုင်းများကို ဖော်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်သာ၊ သင်၏ သဘာဝကို သင် နားလည်နိုင်သည်။ ဤအရာများ မည်သို့ ဖော်ထုတ်ခံရနိုင်သနည်း။ အပြုအမူများသက်သက်ဖြင့် လူအမြောက်အမြားတို့သည် ယင်းတို့ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်း မပြုနိုင်ပေ။ ထို့ပြင် ယင်းတို့အား သဘောပေါက်မိခြင်းနှင့် သိနားလည်ခြင်း အနည်းငယ်မျှကို သင်မရရှိနိုင်ခင် သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ငါးနှစ် ကြာနိုင်ပေသည်။ ယခုတွင်၊ သင်၏ သဘာဝကို သိရှိဖို့ရန်အလို့ငှာ၊ အရာအချို့ကို သင် ပြီးမြောက်ရမည်။ ပထမဦးစွာ၊ သင်နှစ်သက်သောအရာကို သင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရမည်။ ဤအရာက သင် စားလို၊ ဝတ်လိုသည့်အရာကို မရည်ညွှန်းပါ။ ယင်းထက်၊ သင် မွေ့လျော်သည့် အရာများ၊ သင် အားကျသည့် အရာများ၊ သင် ကိုးကွယ်သည့်အရာများ၊ သင် ရှာဖွေသည့်အရာများနှင့် သင်၏ စိတ်နှလုံးတွင် သင် အာရုံစိုက်သည့် အရာမျိုးများကို ဆိုလိုသည်။ ဤအရာနှင့်ပတ်သက်၍ သင်တို့ရှင်းလင်းသလော။ သင်နှစ်သက်သောအရာများထဲတွင် မည်သည့်အရာမျိုးများ ပါဝင်သည်ကို သင်သိသလော။ ယင်းမှာ သင်အာရုံစိုက်နေကျအရာများ၊ သင်ကိုးကွယ်သည့်အရာများ၊ ထိတွေ့ဆက်သွယ်ရာ၌ သင်ပျော်မွေ့သည့် လူအမျိုးအစားများ၊ သင်ပြလုပ်လိုသည့် အရာများနှင့် သင့်စိတ်နှလုံးတွင် သင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မိသည့် လူအမျိုးအစားများပင်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် လူအများစုက ကြီးမြတ်သည့် အဆင့်အတန်းရှိသည့် လူများ၊ ၎င်းတို့၏ ပြောပုံဆိုပုံနှင့် ကိုယ်ဟန်အမူအရာတို့တွင် ရည်မွန်သော လူတို့ကို နှစ်သက်ကြသည်၊ သို့မဟုတ် မြှောက်လုံးပင့်လုံး စကားပြောကောင်းသော သူများ သို့မဟုတ် ဟန်ဆောင်တတ်သော သူတို့ကို နှစ်သက်ကြသည်၊ အထက်ရည်ညွှန်းပါ ပုဂ္ဂိုလ်မှာ မည်သည့်လူတို့ကို ၎င်းတို့ အပြန်အလှန်ဆက်ဆံချင်သည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။ လူတို့ နှစ်သက်သည့် အရာများအတွက်မူ၊ လုပ်ရန် လွယ်ကူသည့် အချို့သော အရာများကို လုပ်ဆောင်လိုခြင်း၊ xxx အခြားသူများက ကောင်းမြတ်သည်ဟု ထင်ပြီး လူတို့ကို ချီးမွမ်းသီဆိုစေပြီး ချီးကျုးစကားများ ပြောစေသည့် အရာများကို လုပ်ဆောင်ခြင်းအား ပျော်မွေ့ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ လူတို့၏ သဘာဝများတွင်၊ ၎င်းတို့ နှစ်သက်သည့် အရာများ၏ ယေဘုယျ လက္ခဏာရပ်တစ်ခု ရှိ၏။ ယင်းမှာ၊ အခြားသူများက အပြင်ပန်း ပုံသဏ္ဍာန်များကြောင့် မနာလိုဖြစ်ကြရသည့် အရာများနှင့် လူတို့ကို ၎င်းတို့ နှစ်သက်ကြပြီး၊ လှပပြီး ဇိမ်ခံပစ္စည်းများနှင့် ပြည့်စုံပုံရသည့် လူတို့ကို ၎င်းတို့ နှစ်သက်ကြကာ၊ ပုံပန်းများကြောင်း အခြားသူများအား ၎င်းတို့ကို ကိုးကွယ်စေသည့် အရာများနှင့် လူတို့ကို ၎င်းတို့ နှစ်သက်ကြလေသည်။ လူတို့ မြတ်နိုးသော အရာများမှာ ကြီးမြတ်သည်၊ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သည်၊ အလွန်လှပပြီး ခမ်းနားပေသည်။ လူအားလုံးက ဤအရာများကို ကိုးကွယ်ကြ၏။ လူတို့သည် မည်သည့် သမ္မာတရားမျှ မပိုင်ဆိုင်သကဲ့သို့၊ စစ်မှန်သော လူသားများ၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ၎င်းတို့ မပိုင်ဆိုင်သည်ကို မြင်နိုင်ပေသည်။ ဤအရာများကို ကိုးကွယ်ရာတွင် အရေးပါမှု အတိုင်းအတာအနည်းငယ်မျှ မရှိသော်လည်း၊ လူတို့သည် ၎င်းတို့ကို နှစ်သက်ကြဆဲဖြစ်၏။...သင်နှစ်သက်သောအရာ၊ သင် အာရုံစိုက်သည့်အရာ၊ သင် ကိုးကွယ်သည့်အရာ၊ သင် အားကျသည့်အရာနှင့် သင့်စိတ်နှလုံးတွင် နေ့တိုင်း သင် တွေးသည့်အရာအားလုံးတို့သည် သင့်သဘာဝ၏ ကိုးစားပြုချက်များ ဖြစ်ကြသည်။ ယင်းမှာ သင့် သဘာဝက မဖြောင့်မတ်ခြင်းကို နှစ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ရသည့် အခြေအနေတွင် ရှိသည်၊ သင့် သဘာဝသည် ဆိုးယုတ်ပြီး ကုသ၍မရနိုင်သည်ကို သက်သေပြရန် လုံလောက်၏။ ဤနည်းဖြင့် သင်၏ သဘာဝကို သင် စိစစ်သင့်၏။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ သင့် ဘဝတွင် သင် မြတ်နိုးသောအရာနှင့် သင် စွန့်လွှတ်သောအရာကို ဆန်းစစ်လော့။ တစ်စုံတစ်ဦးကို သင် ခဏတာ ကောင်းနေနိုင်သည်၊ သို့သော် ဤအရာက သူ သို့မဟုတ် သူမကို သင် နှစ်သက်သည်ဟု သက်သေမပြပေ။ သင် အမှန်တကယ် နှစ်သက်သောအရာမှာ အတိအကျအားဖြင့် သင်၏ သဘာဝတွင် ရှိသည့်အရာ ဖြစ်၏။ သင်၏ အရိုးများ ကွဲကြေခဲ့လျှင်ပင်၊ ယင်းကို သင် နှစ်သက်ပျော်မွေ့ဆဲဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး ဘယ်သောအခါမျှ စွန့်ပစ်နိုင်မည်မဟုတ်။ ဤသည်မှာ ပြောင်းလဲရန် မလွယ်ကူပေ။
၇၃။ မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင် သဘာဝကို သိရှိဖို့ရန် ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ယင်းကို မည်သို့ သိရှိနိုင်သနည်း။ ယင်းကို မည်သည့် ရှုထောင့်များမှ သိရှိရသနည်း။ ထို့အပြင်၊ မိမိ ထုတ်ဖော်သည့် အရာများမှတဆင့် မိမိ၏ သဘာဝကို မည်မျှ တိတိကျကျ ရှုမြင်သင့်ပါသနည်း။ ပထမဦးစွာ၊ လူတစ်ဦး၏ သဘာဝကို ၎င်းတို့၏ စိတ်ဝင်စားမှုများမှတဆင့် သင် တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အဘယ်သို့နည်း။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လူချို့သည် ကခုန်ဖို့ရန် အထူးနှစ်သက်ကြသည်၊ အချို့က အဆိုတော်များ သို့မဟုတ် ရုပ်ရှင်ကြယ်ပွင့်များကို အထူးသဖြင့် ချစ်ကြပြီး၊ အချို့သည် နာမည်ကျော်ကြားသည့် လူအချို့ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်ကြသည်။ ဤစိတ်ဝင်စားမှုများကို ကြည့်ခြင်းအရ၊ ဤလူတို့၏ သဘာဝမှာ အဘယ်နည်း။ ရိုးရှင်းသော ဥပမာနောက်တစ်ခုကို ငါ ပေးမည်- အချို့သည် ထိုထိုသော အဆိုတော်တစ်ဦးကို တကယ်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်သည်မှာ အဆိုတော်၏ လှုပ်ရှားမှုတိုင်း၊ အပြုံးတိုင်းနှင့် စကားလုံးတိုင်းကို စွဲလမ်းရသည့် အဆင့်ထိပင် ရောက်တတ်သည်။ သူတို့သည် ထိုအဆိုတော်အား အစွဲအလမ်းကြီးကြပြီး အဆိုတော်ဝတ်ဆင်သည့်အရာတိုင်းကို ၎င်းတို့ ဓါတ်ပုံပင်ရိုက်ပြီး အတုခိုးကြသည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်ခြင်း အဆင့်က လူတစ်ဦး၏ သဘာဝနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်အရာကို ပြသပါသနည်း။ ယင်းက ထိုလူသည် ၎င်း၏ စိတ်နှလုံးထဲတွင် ထိုအရာများသာရှိပြီး ဘုရားသခင် မရှိသည်ကို ပြသ၏။ ဤလူ တွေးသည့်အရာ၊ ချစ်သည့်အရာနှင့် ရှာဖွေသည့်အရာအားလုံးကို စာတန်အားဖြင့် လုံးဝ ထုတ်ဖော်ထားပေသည်၊ ၎င်းတို့က ထိုအရာများအပေါ် အပ်နှံထားသည့် ဤလူ၏ စိတ်နှလုံးတွင် နေရာယူလေသည်။ ဤတွင် ပြဿနာမှာ အဘယ်နည်း။ တစ်စုံတစ်ရာသည် အစွန်းရောက်သည့်အထိ နှစ်သက်ခံရလျှင်၊ ထိုအရာသည် တစ်စုံတစ်ဦး၏ ဘဝဖြစ်လာနိုင်ပြီး၊ ၎င်းတို့၏ စိတ်နှလုံး၌ နေရယူလာနိုင်ကာ၊ ထိုလူသည် ဘုရားသခင်ကို မလိုချင်ဘဲ ယင်းအစား နတ်ဆိုးကို နှစ်သက်သည့် ရုပ်တုဆင်းတု ကိုးကွယ်သူဖြစ်သည်ကို အပြည့်အဝ သက်သေပြလျက် ရှိပေသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုသို့သော လူတစ်ဦး၏ သဘာဝသည် နတ်ဆိုးကို နှစ်သက်ပြီး ကိုးကွယ်ကာ သမ္မာတရားကို မချစ်သကဲ့သို့ ဘုရားသခင်ကို မလိုချင်သည့် အရာတစ်ခု ဖြစ်သည်ဟု ငါတို့ ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။ ဤသည်မှာ တစ်စုံတစ်ဦး၏ သဘာဝကို လုံးဝ မှန်ကန်သော ရှုမြင်ခြင်း နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်သလော။ ယင်းမှာ လုံးဝမှန်ကန်ပါသည်။ ဤသည်မှာ လူတစ်ဦး၏ သဘာဝကို စိတ်ဖြာလေ့လာပုံဖြစ်၏။ ဥပမာ လူအချို့သည် ပေါလုကို အထူးသဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်ကြသည်၊ ၎င်းတို့သည် အပြင်ထွက်၍ ဟောပြောခြင်းနှင့် အမှုပြုခြင်းကို နှစ်သက်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် အတူတကွ ဆုံစည်းခြင်းကို နှစ်သက်ကြသည်၊ သူတို့သည် လူတို့ကို နားထောင်စေခြင်းငှာ၊ သူတို့ကို ကိုးကွယ်စေခြင်းငှာနှင့် ခြံရံစေခြင်းငှာ အလိုရှိကြသည်။ သူတို့သည် အခြားသူများ၏စိတ်ထဲ၌ ဂုဏ်ဒြပ်ရှိလိုကြပြီး အခြားသူများက သူတို့၏ပုံရိပ်ကို တန်ဖိုးထားရှိသည့်အခါ သဘောကျကြသည်။ ဤအပြုအမူများမှတစ်ဆင့် သူတို့၏ သဘာဝဗီဇများကို ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာကြပါစို့- ထိုကဲ့သိုအပြုအမူများရှိသော လူများ၌ မည်သည့် သဘာဝဗီဇမျိုး ရှိသနည်း။ အကယ်၍ ထိုသူသည် ဤကဲ့သို့ အမှန်တကယ် ပြုမူပါက သူသည် မောက်မာ၍ ထောင်လွှားသောသူဖြစ်ကြောင်း ပြသရန် လုံလောက်၏။ သူသည် ဘုရားသခင်ကို လုံးဝ မကိုးကွယ်ပေ။ မြင့်မားသော ရာထူးဂုဏ်ဒြပ်ကို သူရှာဖွေပြီး အခြားသူများအပေါ် သြဇာအာဏာ ရှိလိုကာ ထိုသူများကို ပိုင်ဆိုင်လိုပြီး ထိုသူတို့၏ စိတ်များထဲ၌ ဝိညာဉ်အသက်တာ ရှိလိုသည်။ ဤသည်မှာ စာတန်၏ စံပြ ပုံရိပ်ပင် ဖြစ်သည်။ သူ့သဘာဝနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုပေါ်လွင်နေသည့်အရာမှာ မောက်မာမှုနှင့် ထောင်လွှားမှုဖြစ်ပြီး၊ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ရန် မလိုလားမှုနှင့် အခြားသူများ၏ ကိုးကွယ်ခြင်းကို ခံလိုမှုတို့ ဖြစ်သည်။ ဤအပြုအမူများမှ သူ၏သဘာဝကို သင် ရှင်းလင်းစွာ မြင်နိုင်သည်။
၇၄။ လူသားများ၏ သဘာဝကို သိရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်လာသည့်အခါ၊ အရေးကြီးဆုံးသော အရာမှာ ၎င်းတို့၏ လောကအမြင်၊ ဘဝအမြင်နှင့် တန်ဖိုးများ၏ ရှုထောင့်မှ ယင်းကို သိရှိရန် ဖြစ်သည်။ နတ်ဆိုးနှင့်ဆိုင်သော သူအားလုံးတို့သည် မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်အတွက် အသက်ရှင်ကြ၏။ ၎င်းတို့ ဘဝအမြင်များနှင့် ဆိုရိုးများက၊ “လူတိုင်းက ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ရှိတယ်၊ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရော” ဆိုသကဲ့သို့သော စာတန်၏ ဆိုရိုးစကားများမှ အဓိက လာလေသည်။ ထိုနတ်ဆိုးဘုရင်များ၊ ကြီးမြတ်သူများနှင့် ကမ္ဘာမြေ၏ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်များက ၎င်းတို့၏ ဘဝ ဖြစ်လာကြသည်။ အထူးသဖြင့်၊ တရုတ်လူမျိုးများက “ပညာရှိ”ဟု အမွှမ်းတင်ခံရသူ ကွန်ဖြူးရှပ်၏ စကားအများစုမှာ လူတို့၏ ဘဝ ဖြစ်လာပြီးဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဒေါင်အယူဝါဒတို့၏ နာမည်ကျော် ဆိုရိုးများနှင့် နာမည်ကျော် ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးမျိုးတို့၏ မကြာခဏ ကိုးကားခံရသည့် ဂန္တဝင် ဆိုရိုးစကားများလည်း ရှိပေသည်၊ ဤအရာအားလုံးသည် စာတန်၏ အတွေးအခေါ်နှင့် စာတန်၏ သဘာဝတို့၏ ပုံကြမ်းများ ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် စာတန်၏ သဘာဝနှင့်ဆိုင်သော အကောင်းဆုံး သာဓကများနှင့် ရှင်းပြချက်များလည်း ဖြစ်ကြသည်။ လူသား၏ စိတ်နှလုံးထဲသို့ သွင်းပေးခံခဲ့ရသည့် ဤအဆိပ်များအားလုံး စာတန်ထံမှ လာလေသည်၊ ၎င်းတို့ထဲမှ နည်းနည်းမျှ ဘုရားသခင်ထံမှ မလာပေ။ ထိုသို့သော မုသားများနှင့် အဓိပ္ပါယ်မရှိသည့်စကားများသည် ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်နှင့်လည်း တိုက်ရိုက် ဆန့်ကျင်မှုလျက် ရှိ၏။ အပြုသဘောဆောင်သော အရာများအားလုံး၏ လက်တွေ့အရှိတရားသည် ဘုရားသခင်ထံမှ လာပြီး၊ လူသားများကို အဆိပ်ခတ်သည့် အပျက်သဘောဆောင်သော အရာများအားလုံးက စာတန်ထံမှာ လာသည်မှာ လုံးဝ ရှင်းသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ သဘာဝဗီဇနှင့် သူ၏ဘဝအမြင်များနှင့် တန်ဖိုးများအားဖြင့် သူသည် မည်သူနှင့် သက်ဆိုင်ကြောင်းကို သင်ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သည်။. စာတန်သည် နိုင်ငံတော်အစိုးရများ၏ ပညာရေးနှင့် လွှမ်းမိုးမှု၊ ကျော်ကြားသူများနှင့် ကြီးမြတ်သူများမှတစ်ဆင့် လူတို့ကို ဖောက်ပြန်ဖျက်ဆီးသည်။ သူတို့၏ ပေါက်ကရစကားတို့သည် လူတို့၏ ဘဝနှင့် သဘာဝဗီဇဖြစ်လာသည်။ “မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာ၊ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာပြီးရော” ဆိုသည်မှာ ခပ်သိမ်းသောလူတို့အထဲသို့ သွတ်သွင်းပေးထားသည့် လူသိများသော စာတန်နှင့်ဆိုင်သည့် ဆိုရိုးတစ်ခုဖြစ်ပြီး လူတို့၏ဘဝများ ဖြစ်လာလေပြီ။ ဤအရာနှင့်တူသော ဘဝဒဿနဆိုင်ရာ အခြားစကားလုံးများလည်း ရှိသည်။ စာတန်သည် လူတို့ကို ပညာပေးဖို့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစီ၏ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသော ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို အသုံးပြုလျက် လူသားမျိုးနွယ်ကို အတိုင်းမသိ ပျက်စီးခြင်း၏ ချောက်နက်ထဲသို့ ကျဆင်းနစ်မြှုပ်သွားစေပြီးအဆုံးတွင် လူတို့သည် စာတန်ကိုအစေခံ၍ ဘုရားသခင်ကို ခုခံသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ဖျက်ဆီးခြင်းကို ခံကြရသည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲ၌ ဆယ်စုနှစ်ချီ၍ တက်ကြွလှုပ်ရှားလာပြီးဖြစ်သာ လူတစ်ဦးအား “သင့်အနေဖြင့် လောကကြီးထဲ၌ ကြာမြင့်စွာ အသက်ရှင်လာခဲ့ပြီး များစွာစွမ်းဆောင်ရရှိပြီးပေပြီ၊ မည်သည့်ထင်ရှားသော ဆိုရိုးများကို သင်လက်ခံထားသနည်း” “‘အရာရှိများကို တံစိုးလက်ဆောင်များ ပေးသူတို့သည် ထိုသူတို့၏ တိုက်ခိုက်ခြင်းကို မခံရ၊ ထို့ပြင် ခယဝယ မလုပ်သောသူတို့သည် မည်သည့်အရာမျှ မပြီးမြောက်နိုင်’ ဟူသည်မှာ အရေးအကြီးဆုံးတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်” ဟု သူတို့ပြောကြလိမ့်မည်။ ထိုသို့သောစကားသည် သူ၏သဘာဝကို ထင်ဟပ်စေသည် မဟုတ်လော။ သူ၏သဘာဝသည် ရာထူးဂုဏ်သိန် ရရန်အတွက် မည်သည့်နည်းလမ်းကိုမျှ လက်မလွှတ်ရန် ဖြစ်သည်၊ အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းသည် သူ့ကိုအသက်ပေးသောအရာ ဖြစ်နေသည်။ လူတို့၏ အသက်တာ၌၊ သူတို့၏ အမှုအရာများကို ကိုင်တွယ်ခြင်းထဲ၌၊ ပြီးလျှင် အခြားသူများနှင့် သူတို့၏ အပြုအမူနှင့် အဆက်အသွယ်များထဲ၌ စာတန်၏ အဆိပ်များဖြစ်သည့် ဥပမာအားဖြင့် သူတို့၏ ဘဝဒဿနများ၊ သူတို့၏ အမှုအရာများကို ဆောင်ရွက်ပုံ စသည်တို့ များစွာ ရှိဆဲပင်ဖြစ်ပြီး ထိုသူတို့၌ သမ္မာတရား အနည်းငယ်မျှပင် မရှိလုနီးပါး ဖြစ်ကာ သူတို့၏ ဆိုရိုးများသည် အဆင်းနီသော နဂါးကြီး၏ အဆိပ်များနှင့် ပြည့်နှက်နေပြီး သူတို့အားလုံးသည် စာတန်ထံမှ လာကြသည်။ ထို့ကြောင့် လူတို့၏ အရိုးများနှင့် အသွေးတို့၌ စီးဆင်းကြသော အရာအားလုံးသည် စာတန်၏ အရာများဖြစ်ပေသည်။ ထိုအရာရှိများ၊ သြဇာအာဏာရှိသူများနှင့် အောင်မြင်မှုကို စွမ်းဆောင်ရရှိသောသူများ အားလုံးတို့တွင် အောင်မြင်မှုအတွက် မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းနှင့် လျှို့ဝှက်ချက်တို့ ရှိပေရာ ထိုလျှို့ဝှက်ချက်သည် သူတို့သဘာဝ၏ ပကတိကိုယ်စားပြုချက် ဖြစ်သည်မဟုတ်လော။ သူတို့သည် လောကထဲ၌ ထိုသို့သော ကြီးမားသည့်အရာများကို လုပ်ဆောင်ထားကြပြီးဖြစ်သည်၊ သို့သော်လည်း ထိုအရာများ၏ နောက်ကွယ်တွင်ရှိသည့် အကြံအစည်များကို မည်သူကမျှ မရိပ်စားမိနိုင်ကြပေ။ ဤအရာက ထိုသူတို့၏သဘာဝမှာ အလွန်ပင် စဉ်းလဲဉာဏ်များပြီး အငြိုးသိုတတ်ကြောင်းကို ပြသသည်။ လူသားသည် စာတန်၏ နက်ရှိုင်းစွာ ဖောက်ပြန်ဖျက်ဆီးခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ စာတန်၏ အဆိပ်သည် ခပ်သိမ်းသော လူပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း၏ အသွေးထဲ၌ စီးဆင်းနေပြီး လူသား၏ သဘာဝသည် ထင်ထင်ရှားရှား ဖောက်ပြန်ကာ ဆိုးယုတ်၍ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတတ်ပြီး စာတန်၏ ဒဿနများနှင့် ပြည့်နှက်၍ ထိုဒဿနများထဲ၌ နှစ်မြှုပ်၏၊ ၎င်းသည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်သော သဘာဝလုံးလုံးပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် လူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ခုခံကြပြီး ဆန့်ကျင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ပါက လူသား၏သဘာဝကို လူတိုင်းသိနိုင်ပေသည်။
၇၅။ လူတို့၏ မိမိကိုယ်ကိုယ် သိကျွမ်းခြင်းက အလွန်ပေါ့တန်လျှင်၊ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းဖို့ မဖြစ်နိုင်သည်ကို ၎င်းတို့ တွေ့ရလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့၏ အသက်တာ စိတ်သဘောထား တကယ်ကို ပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်။ မိမိကိုယ်ကိုယ် နက်နဲသိမ်မွေ့သော အဆင့်တစ်ခုအထိ သိရှိရန် လိုအပ်၏၊ ဆိုလိုသည်မှာ မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်သဘာဝကို သိရှိခြင်းနှင့် ထိုသဘာဝတွင် မည်သည့် အရိပ်လက္ခဏာများ ပါဝင်သည်၊ ၎င်းတို့ မည်သို့ ပေါ်ပေါက်သည်ဆိုသည်နှင့် ဤတို့ မည်သည့်အရပ်မှ လာသည်တို့ကို သိရှိရန် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဤအရာများကို သင် အမှန်တကယ် မုန်းတီးနိုင်ပါသလော။ သင်၏ ကိုယ်ပိုင် အကျည်းတန်သော ဝိညာဉ်နှင့် သင်၏ ဆိုးယုတ်သော သဘာဝကို သင် မြင်ပြီးပြီလော။ မိမိကိုယ်ကိုယ်၏ အမှန်တရားကို သင် အမှန်တကယ် တွေ့မြင်နိုင်လျှင်၊ သင်သည် မိမိကိုယ်ကိုယ် စတင်စက်ဆုပ်ရွံ့ရှာလိမ့်မည်။ မိမိကိုယ်ကိုယ် စက်ဆုပ်ရွံ့ရှာပြီး ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို သင် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်သောအခါ၊ သင်သည် ဇာတိပကတိကို စွန့်လွှတ်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး အခက်အခဲမရှိဘဲ သမ္မာတရားကို ဆောင်ရွက်ဖို့ ခွန်အား သင်ရှိပါလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့် လူများစွာတို့သည် မိမိတို့၏ သွေးသား နှစ်သက်မှုများနောက် လိုက်ကြသနည်း။ ယင်းမှာ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ် အတော်ကောင်းသည်ဟု ထင်မှတ်ကြသောကြောင့် ဖြစ်၏၊ ၎င်းတို့ မှန်ကန်ပြီး တရားသည်၊ ၎င်းတို့တွင် အမှားများမရှိသကဲ့သို့ လုံးဝ မှန်ကန်မှုတွင် ရှိသည်ဟုပင် ခံစားကြ၏။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် တရားမျှတခြင်းက ၎င်းတို့ဖက်တွင် ရှိသည်ဟု ယူဆချက်ဖြင့် ပြုမူကြလေ၏။ လူတစ်ဦးသည် မိမိ၏ စစ်မှန်သော သဘာဝဗီဇမှာ မည်မျှအကျည်းတန်ကြောင်း၊ မည်မျှ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းကြောင်းနှင့် မည်မျှသနားစဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုသည့်အခါ သူသည် ယခင်ကကဲ့သို့ မိမိကိုယ်ကိုယ် လွန်စွာမောက်မာခြင်း၊ လွန်လွန်ကဲကဲပင် မာနကြီးခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်ကိုယ် အလွန်ကျေနပ်အားရခြင်း ရှိမည်မဟုတ်ပေ။ “ကျွန်ုပ်သည် အလွန်အလေးအနက်ထားပြီး လက်တွေ့ကျကာ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်အချို့ကို လက်တွေ့ကျင့်ဆောင်ရမည်။ ထိုသို့မဟုတ်လျှင် ကျွန်ုပ်သည် လူသားဖြစ်ခြင်း၏ စံချိန်နှင့် မှန်းချက်ကိုက်ညီလိမ့်မည် မဟုတ်သည့်အပြင် ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်ထဲ၌ အသက်ရှင်ရန် ရှက်လိမ့်မည်” ဟု သူ ခံစားရသည်။ သူသည် သူ့ကိုယ်သူ အမှန်တကယ် အသုံးမကျသူ၊ အမှန်တကယ် အရေးမပါသူအဖြစ် မြင်လေ၏။ ဤအချိန်တွင် သမ္မာတရားကို ကျင့်ဆောင်ရန် သူ့အတွက် လွယ်ကူပြီး သူ၌ လူသားတစ်ဦးဖြစ်သည့်အတိုင်း အတော်ပင်တူလာမည်။ လူတို့သည် မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ် အမှန်တကယ် စက်ဆုပ်သည့်အခါမှသာ ဇာတိပကတိကို ၎င်းတို့ စွန့်လွှတ်နိုင်ပေသည်။ ၎င်းတို့ မိမိကိုယ်ကိုယ် မစက်ဆုပ်လျှင်၊ ဇာတိပကတိကို ၎င်းတို့ စွန့်လွှတ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။ မိမိကိုယ်ကိုယ် အမှန်တကယ် စက်ဆုပ်ခြင်းတွင် အရာအချို့ ပါဝင်၏- ပထမဦးစွာ၊ မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင် သဘာဝကို သိရှိခြင်းနှင့်၊ ဒုတိယ၊ မိမိကိုယ်ကိုယ် ချို့တဲ့ပြီး နုံချာသောသူအဖြစ် မြင်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုယ် အလွန်အမင်း သေးနုတ်ပြီး အရေးမပါသူအဖြစ် မြင်ခြင်းနှင့် နုံချာပြီး ညစ်ပတ်သော မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင် ဝိညာဉ်ကို မြင်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ မိမိ အမှန်တကယ် မည်သည့်အရာဖြစ်သည်ကို အပြည့်အဝ မြင်ပြီး ဤရလဒ်ရရှိသည့်အခါတွင်၊ လူတစ်ဦးသည် မိမိကိုယ်ကိုယ် သိကျွမ်းခြင်းအား အမှန်တကယ်ရရှိပြီး၊ မိမိကိုယ်ကိုယ် အပြည့်အဝ သိရှိလာပြီဟု ဆိုနိုင်ပေသည်။ ထိုအခါတွင်မှ မိမိကိုယ်ကိုယ် ကျိန်ဆဲမိသည်အထိ ရောက်လျက် မိမိကိုယ်ကိုယ် အမှန်တကယ် မုန်းတီးနိုင်ပြီး၊ လူသားတစ်ဦးနှင့် မဆင်တော့သည်အထိ စာတန်အားဖြင့် အကြီးအကျယ် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခံခဲ့ရသည်ကို အမှန်တကယ် ခံစားနိုင်ပေသည်။ ထို့နောက်တွင်၊ တစ်နေ့၊ သေခြင်း၏ ခြိမ်းခြောက်မှု ထွက်ပေါ်သောအခါ၊ ထိုသို့သော လူတစ်ဦးက၊ “ဤသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သော အပြစ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် အမှန်ပင် ဖြောင့်မတ်ပေ၏၊ ကျွန်ုပ် အမှန်တကယ် သေသင့်သည်တကား။” ဟု တွေးလိမ့်မည်။ ဤအချိန်တွင် သူသည် ဘုရားသခင်ကို အပြစ်တင်ဖို့မဆိုထားနှင့်၊ မကျေနပ်ချက်ပင် တင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဘဲ၊ သူသည် အလွန်နုံချာသည်၊ ဘုရားသခင်အားဖြင့် ချေမှုန်းခံသင့်သည်အထိ အလွန် ညစ်ညမ်းပြီး ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသကဲ့သို့၊ သူ၏ ဝိညာဉ်ကဲ့သို့သော ဝိညာဉ်သည် ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် အသက်ရှင်ဖို့ရန် မသင့်တော်ပေ။ ဤအချိန်တွင် ဤလူသည် ဘုရားသခင်ကို သစ္စာဖောက်ဖို့ သို့မဟုတ် မကျေနပ်ချက်တင်ဖို့ မဆိုထားနှင့်၊ ဘုရားသခင်ကို အာခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အကယ်၍ လူတစ်ဦးသည် မိမိကိုယ်ကိုယ် မသိရှိသကဲ့သို့ မိမိကိုယ်ကိုယ် အတော်ကောင်းမွန်သည်ဟု ထင်မှတ်သေးလျှင်၊ သေခြင်းက တံခါးခေါက်သည့်အခါ၊ ဤလူက၊ “ကျွန်ုပ်၏ ယုံကြည်ခြင်းတွင် ကျွန်ုပ်သည် အလွန်ကောင်းစွာ ပြုခဲ့ပေပြီ။ အလွန်များစွာ ကျွန်ုပ် စွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်၊ အလွန်များစွာ ကျွန်ုပ် ဒုက္ခခံစားပြီးဖြစ်သည်၊ သို့တိုင် နောက်ဆုံးတွင်၊ ဘုရားသခင်က ယခု ကျွန်ုပ်ကို သေခိုင်းလေပြီ။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား အဘယ်မှာရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်မသိ။ အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်ကို သေဖို့ သူ စေခိုင်းနေရပါသနည်း။ ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သော လူတစ်ဦးပင် သေရမည်ဆိုလျှင်၊ မည်သူ ကယ်တင်ခံရလိမ့်မည်နည်း။ လူသားမျိုးနွယ်သည် အဆုံးသတ်သို့ ရောက်ရှိလိမ့်မည် မဟုတ်လော”ဟု တွေးလိမ့်မည်။ ပထမဦးစွာ၊ ဤလူသည် ဘုရားသခင်နှင့် ပတ်သက်သော အယူအဆများ ရှိ၏။ ဒုတိယ၊ ဤလူသည် မည်သည့် ကျိုးနွံနာခံခြင်း တစ်ခုတစ်လေကိုမျှ မပြသဘဲလျက် ညည်းညူနေပေသည်။ ဤသည်မှာ ပေါလုကဲ့သို့ ဖြစ်၏- သူသေခါနီးအချိန်တွင်၊ သူသည် မိမိကိုယ်ကိုယ် မသိရှိခဲ့သကဲ့သို့၊ ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်ခြင်း နီးကပ်လာသည့်အချိန်တွင်၊ နောင်တရဖို့ အလွန် နောက်ကျခဲ့ပေသည်။
ခရစ်တော်၏ပြောဆိုချက် မှတ်တမ်းများ စာအုပ်ထဲရှိ “မိမိကိုယ်ကို သိခြင်းသည် အဓိကအားဖြင့် လူ့သဘာဝကို သိခြင်းဖြစ်၏” မှ
၇၆။ လူတို့ကို မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ် သိခွင့်ပေးရန်၊ ဘုရားသခင်သည် မတူကွဲပြားသော နည်းစနစ်များစွာကို အသုံးပြုခဲ့ပေပြီ။ အတွေ့အကြုံမှတဆင့် မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ် သိကျွမ်းမှုကို တဖြည်းဖြည်းရရှိရန် လူတို့ကို သူ အခွင့်ပေး၏။ စမ်းသပ်မှုများဖြစ်စေ၊ တရားစီရင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းကို ဖြစ်စေ၊ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့် တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်များထဲတွင် လူတို့ မရပ်မနား တွေ့ကြုံရန် အခွင့်ပေး၏။ လူတို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များ၏ တရားစီရင်ခြင်း၊ ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့် ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းတို့ကို တွေ့ကြုံရပြီး၊ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များ၏ ဉာဏ်အလင်းပေးခြင်းနှင့် အလင်းပြခြင်းတို့ကိုလည်း သူတို့ တွေ့ကြုံရသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ လူတို့ကို မိမိတို့၏ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်း၊ ပုန်ကန်လိုခြင်းနှင့် မိမိတို့၏သဘာဝတို့ကို သတိပြုရန် သူ အခွင့်ပေး၏။ သို့ဆိုလျှင် ဤအရာအားလုံး၏ နောက်ဆုံး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မှာ အဘယ်နည်း။ ဤနောက်ဆုံး ပန်းတိုင်မှာ ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်ကို တွေ့ကြုံသော လူပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအား လူတို့သည် မည်သည့်အရာဖြစ်ကြသည်ကို သိခွင့်ပေးဖို့ရန် ဖြစ်သည်။ “လူတို့ ဖြစ်သည့်အရာ” ဆိုသည်တွင် မည်သည့်အရာ ပါဝင်သနည်း။ ယင်းသည် လူတို့ကို မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင် လက္ခဏာ၊ ရာထူး၊ ဝတ္တရားနှင့် တာဝန်တို့ကို သိခွင့်ပေးခြင်း ပါဝင်၏။ ယင်းသည် လူတို့ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြသည်နှင့် သင်ကိုယ်တိုင် မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို သိခွင့်ပေးဖို့ ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ဘုရားသခင်က လူတို့ကို မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ် သိခွင့်ပေးခြင်း၏ နောက်ဆုံး ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဖြစ်သည်။
၇၇။ ငါတို့ စိတ်နှလုံးတွင်ရှိသော အရာတစ်ခုစီတိုင်းသည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်၏။ ဤတွင် ကောင်းမြတ်သည်ဟု ငါတို့ ထင်သည့်အရာများနှင့် အပြုသဘောဆောင်သည်ဟု ငါတို့ ယုံကြည်နှင့်သည့် အရာများပင် ပါဝင်လေသည်။ ဤအရာများကို သမ္မာတရားများအဖြစ်၊ ပုံမှန် လူ့သဘာဝ၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်နှင့် အပြုသဘောဆောင်သော အရာများအဖြစ် ငါတို့ စာရင်းသွင်းခဲ့ကြသည်၊ သို့သော်၊ ဘုရားသခင်၏ ရှုထောင့်အမြင်အရ၊ ၎င်းတို့သည် သူ စက်ဆုပ်ရွံရှာသော အရာများ ဖြစ်ကြသည်။ ငါတို့တွေးထင်သည့်အရာနှင့် ဘုရားသခင်ပြောသည့် သမ္မာတရားကြားထဲက ကွာဟချက်မှာ မည်မျှ ကျယ်ပြောသနည်း။ ယင်းကို တိုင်းတာနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ငါတို့သည် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိရှိရမည်။ ငါ့တို့၏ စိတ်ကူးများ၊ ရှုထောင့်အမြင်များနှင့် လုပ်ရပ်များမှသည် ငါတို့ ရရှိပြီးသည့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆိုင်သော ပညာရေးတိုင်၊ အရာအသီးသီးသည် စူးစူးစိုက်စိုက် နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် ရှာဖွေထိုက်ပြီး ထွင်းထွင်းဖောက်ဖောက် စိတ်ဖြာလေ့လာထိုက်ပေသည်။ ဤအရာများထဲမှ အချို့မှာ လူမှုရေး ပတ်ဝန်းကျင်များမှ လာသည်၊ အချို့မှာ မိသားစုများမှ လာသည်၊ အချို့မှာ ကျောင်းပညာရေးမှ လာပြီး၊ အချို့မှာ စာအုပ်များမှ လာလေသည်။ အချို့သည် ငါတို့၏ စိတ်ကူးများနှင့် အယူအဆများမှလည်း လာ၏။ ၎င်းတို့က ငါတို့၏ စကားများနှင့် လုပ်ရပ်များကို ချည်နှောင်ပြီး ထိန်းချုပ်ကာ၊ ငါတို့၏ စိတ်များကို စိုးမိုးပြီး ငါတို့ လုပ်ဆောင်သည့်အရာ၌ ငါတို့၏ ရည်မှန်းချက်များ၊ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ပန်းတိုင်တို့ကို ဦးဆောင်လမ်းပြသည့်အတွက် ဤအရာမျိုးများသည် ထိတ်လန့်ဖွယ်အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်။ ဤအရာများကို ကျွန်ုပ်တို့ မတူးဖော်ပါက ကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို မည်သည့်အခါမျှ ကျွန်ုပ်တို့ အပြည့်အဝလက်ခံလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ၊ ထို့ပြင် ဘုရားသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်များကို မည်သည့်အခါမျှ သံသယမရှိဘဲ လက်ခံပြီး ယင်းတို့ကို လက်တွေ့ကျင့်ဆောင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ သင်၏ ကိုယ်ပိုင် စိတ်ကူးများနှင့် ရှုထောင့်အမြင်များ၊ မှန်သည်ဟု သင်ယုံကြည်သည့် အရာများအပေါ် လက်ခံယုံကြည်မှုများကို သင် သိုထားသရွေ့၊ သင်သည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို ဘယ်သောအခါမျှ အပြည့်အဝ သို့မဟုတ် လုံးလုံးလျားလျား လက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့၊ ၎င်းတို့၏ မူရင်းပုံစံဖြင့် ၎င်းတို့ကို သင် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်လိမ့်မည် မဟုတ်ချေ၊ သင်သည် ၎င်းတို့ကို သင့်စိတ်ထဲတွင် ပထမဆုံး စီမံပြီးနောက်တွင်သာ ဧကန်မုချ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်လိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ အမှုအရာများကို သင် လုပ်လိမ့်မည့်ပုံဖြစ်ပြီး၊ ယင်းသည် အခြားသူများကို သင် ကူညီသည့် နည်းလမ်းလည်း ဖြစ်လိမ့်မည်- ဘုရားသခင်ထံမှ အခြေခံသဘောတရား အနည်းငယ်နှင့် လူသား၏ အခြေခံသဘောတရား အနည်းငယ်ကို ရောစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့တိုင် ထိုသို့သော အမူအကျင့်က သမ္မာတရားကို သင် လက်တွေ့ကျင့်ဆောင်နေသည်၊ သမ္မာတရားကို နားလည်ခြင်းတစ်ခုကို သင်ရရှိပြီဖြစ်ပြီး အရာရာတိုင်းကို သင်လက်ဝယ်ရရှိပြီဟု သင် ဆက်၍ ယုံကြည်ပေလိမ့်သည်။ လူသားမျိုးနွယ်၏ အခြေအနေမှာ သနားစဖွယ်ဖြစ်သည် မဟုတ်လော။ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ ဖြစ်သည်မဟုတ်လော။
ခရစ်တော်၏ပြောဆိုချက် မှတ်တမ်းများ စာအုပ်ထဲရှိ “သင်၏လွဲမှားသောအယူအဆကြောင့်ပေါ်ပေါက်သည့်အမြင်များကို သိခြင်းဖြင့်သာ သင့်ကိုယ်သင် သိနိုင်မည်” မှ
၇၈။ သင့်ကိုယ်သင် သိရှိရန်၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသော အနှစ်သာရ၊ သင်ကိုယ်တိုင်၏ ပဓာနကျသော အားနည်းချက်၊ သင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် သဘာဝတို့ကို သင် သိရမည်။ သင်သည် သင်၏ ရည်မှန်းချက်များ၊ သင်၏ ရှုထောင့်အမြင်များနှင့် သင်၏ သဘောထားကဲ့သို့သော သင်၏ နေ့စဉ်ဘဝတွင် ထုတ်ဖော်ပြသည့် အရာများကိုလည်း၊ သင် အိမ်တွင် ရှိသည်ဖြစ်စေ အပြင်၌ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ စုဝေးကြသည့်အခါများ၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို သင် စားသောက်နေသည့်အခါ၊ သို့မဟုတ် သင် ကြုံရသည့် ကိစ္စရပ်တစ်ခုစီတိုင်းတွင် တကယ့်နောက်ဆုံး အသေးစိတ်အချက်အလက်အထိ သင် သိရှိရမည်။ ဤအရာများမှတဆင့် သင့်ကိုယ်သင် သိရှိလာမည်။ သင့်ကိုယ်သင် ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော အဆင့်၌ သိရှိဖို့၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို သင် ပေါင်းစပ်ရမည်၊ သူ၏ နှုတ်ကပတ်တော်များအပေါ် အခြေပြု၍ သင့်ကိုယ်သင် သိရှိခြင်းအားဖြင့်သာ ရလဒ်များကို သင် ရရှိနိုင်ပေသည်။
၇၉။ စိတ်သဘောထား၌ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခု ရရှိခြင်းတွင် အဓိကသော့ချက်မှာ မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်သဘာဝကို သိရှိရန်ဖြစ်ပြီး၊ ဤအရာသည် ဘုရားသခင်ထံမှ ထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့်အညီ ဖြစ်ပျက်ရမည်ဖြစ်၏။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်၌သာ တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်အကျည်းတန်သော သဘာဝကို သိရှိနိုင်သည်၊ မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်သဘာဝထဲက စာတန်၏ အမျိုးမျိုးသော အဆိပ်များကို သတိပြုနိုင်သည်၊ မိမိ မိုက်မဲပြီး မသိနားမလည်သည်ကို နားလည်နိုင်ပြီး မိမိ၏ သဘာဝထဲက အားနည်းပြီး အပျက်သဘောဆောင်သော အရိပ်လက္ခဏာများကို သတိပြုမိနိုင်သည်။ ဤအရာများကို အပြည့်အဝ သိရှိပြီး၊ မိမိကိုယ်ကိုယ် စစ်မှန်စွာ မုန်းတီးနိုင်ပြီး ဇာတိပကတိကို စွန့်လွှတ်ပြီးနောက်၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို တစ်သမတ်တည်း ဆောင်ရွက်ပြီး၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်နှင့် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို လုံးဝ ကျိုးနွံနာခံဖို့ အလိုဆန္ဒရှိပြီးနောက်တွင်၊ ပေတရု၏ လမ်းကြောင်းပေါ် သင် စတင်ပြီးခဲ့လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
၈၀။ လူတစ်ဦး၏ အနှစ်သာရမှာ အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို မည်သို့ ပြောနိုင်မည်နည်း။ လူတို့သည် မည်သည့်အရာမျှ မပြုလုပ်သည့်အခါ သို့မဟုတ် သူတို့ အသေးအဖွဲကိစ္စ ပြုလုပ်သည့်အခါ လူတစ်ဦး၏ သဘောသဘာဝနှင့် အနှစ်သာရတို့မှာ အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို သင်မပြောနိုင်ပေ။ ဤအရာတို့ကို သူတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ နောက်ကွယ်ရှိ အကြောင်းရင်းများ၊ သူတို့ ပြုလုပ်သည့်အရာ၏ နောက်ကွယ်ရှိ ကြံရွယ်ချက်များ၊ သူတို့ လက်ခံသိုလှောင်ထားသည့် ဆန္ဒများနှင့် သူတို့ လျှောက်လှမ်းသည့် လမ်းကြောင်းတွင် ပုံမှန်ပြသထားသည်။ ပို၍ပင် အရေးကြီးသည်မှာ ဤအရာများသည် ဘုရားသခင် ်စီစဉ်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုနှင့် သူတို့ ကြုံတွေ့သောအခါ၊ သူတို့အပေါ် ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်သည့် တစ်စုံတစ်ရာနှင့် သူတို့ ကြုံတွေ့သောအခါ၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်းကို သူတို့ခံရသောအခါ၊ သို့မဟုတ် ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းကို ခံရသောအခါ၊ သို့မဟုတ်ပါက သူတို့ကို ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် အလင်းပေးပြီး လမ်းပြသောအခါ သူတို့၏ တုံ့ပြန်ပုံ၌ ပြသထားသည်။ ဤအရာအားလုံးသည် အဘယ်အရာနှင့် ဆက်စပ်သနည်း။ ယင်းသည် လူတစ်ဦး၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ သူတို့ အသက်ရှင်နေထိုင်ပုံနှင့် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ပြုမူနေထိုင်သည့် အခြေခံသဘောတရားများနှင့် ဆက်စပ်လေသည်။ ယင်းသည် သူတို့ ရှာဖွေလိုက်စားမှု၏ ဦးတည်ချက်နှင့် ပန်းတိုင်များနှင့် သူတို့ရှာဖွေလိုက်စားသည့် နည်းလမ်းများနှင့် ဆက်စပ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ ယင်းမှာ ဤလူလျှောက်လှမ်းသည့် လမ်းကြောင်း၊ သူတို့အသက်ရှင်ပုံ၊ သူတို့ခံယူသည့်အရာနှင့် သူတို့ဖြစ်တည်ခြင်း၏ အခြေခံအကြောင်းရင်းမှာ အဘယ်အရာဖြစ်သည် ဟူသည်နှင့် ဆက်စပ်လေသည်။
၈၁။ မိမိကိုယ်ကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်သိခြင်း သော့ချက်မှာ ဤသို့ဖြစ်သည်- အချို့သော ကဏ္ဍများတွင် သင်ကောင်းစွာပြုခဲ့ပြီးသည် သို့မဟုတ် မှန်ကန်သောအရာကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသည်ဟု သင်ပို၍ခံစားရလေ၊ ထို့ပြင် သင်သည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို ကျေနပ်စေနိုင်သည် သို့မဟုတ် တစ်ချို့သောကဏ္ဍများတွင် ကြွားဝါဖို့ထိုက်တန်သည်ဟု ပိုထင်လေဆိုလျှင် ထိုကဏ္ဍများ၌ သင့်ကိုယ်သင်သိရန် ပို၍ထိုက်တန်ပြီး သင်၌ မည်သည့်မစင်ကြယ်မှုများ ရှိကြောင်းကိုသိရန် ၎င်းတို့ကို နက်နဲစွာတူးဖော်ရန်လည်းကောင်း၊ သင့်အထဲရှိ မည်သည့်အရာများသည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို ကျေနပ်စေနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်းကို ကြည့်ရန် ပို၍ထိုက်တန်လေ ဖြစ်သည်။ ပေါလုကို ပုံဥပမာတစ်ခုအဖြစ် ယူကြစို့။ ပေါလုသည် အထူးနှံ့စပ်သိရှိပြီး သူ၏ ဟောပြောခြင်းအလုပ်တွင် ဆင်းရဲဒုက္ခများစွာ ခံစားခဲ့ပေသည်။ များစွာသောလူတို့က သူ့ကို အထူးသဖြင့် ကြည်ညိုခဲ့ကြသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်၊ အလုပ်များစွာ ပြီးစီးသည့်နောက်တွင်၊ သူ့အတွက် သရဖူတစ်ခု ဖယ်ထားပြီးဖြစ်လိမ့်မည်ဟု သူ ထင်မှတ်ခဲ့သည်။ ဤအရာက သူ့ကို နောက်ဆုံး ဘုရားသခင်အားဖြင့် အပြစ်ပေးခံရသည်အထိ မှားယွင်းသော လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် သာ၍ ဝေးဝေး ဆက်သွားစေခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်၊ သူသည် မိမိကိုယ်ကိုယ် ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီး စိတ်ဖြာလေ့လာခဲ့လျှင်၊ ယင်းကို သူ တွေးခဲ့လိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ တနည်းအားဖြင့်၊ ပေါလုသည် သခင်ယေရှု၏ နှုတ်ကပတ်တော်များထဲက သမ္မာတရားကို ရှာဖွေခြင်းအပေါ် အာရုံမစိုက်ခဲ့ပေ၊ သူသည် သူ၏ ကိုယ်ပိုင် အယူအဆများနှင့် စိတ်ကူးများကိုသာ ယုံကြည်ခဲ့သည်။ ကောင်းမွန်သော အရာအနည်းငယ်ကို သူ လုပ်ဆောင်ပြီး အပြုအမူကောင်းကို ပြသသရွေ့၊ ဘုရားသခင်၏ ချီးမွမ်းခြင်းနှင့် ဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရမည်ဟု သူ ထင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ သူ၏ ကိုယ်ပိုင်အယူအဆများနှင့် စိတ်ကူးများက သူ၏ စိတ်ဝိညာဉ်ကို ကန်းစေခဲ့ပြီး သူ၏ စရိုက်မှန်ကို ဖုံးကွယ်ခဲ့သည်။ သို့သော်၊ ဤအရာကို လူတို့သည် မသိခဲ့ကြဘဲ၊ ဤအရာကို ဘုရားသခင်၏ ဖော်ထုတ်ပေးခြင်းမရှိဘဲနှင့် ပေါလုကို သူတို့ ရည်မှန်းရမည့် စံနှုန်းတစ်ခု၊ အသက်ရှင်ရမည့် စံနမူနာတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်ထားရှိခဲ့ကြပြီး၊ သူ့ကို ၎င်းတို့ ဖြစ်လိုသည့်သူတစ်ဦးအဖြစ် မှတ်ယူကြလေသည်။ ပေါလုသည် ၎င်းတို့ ရှာဖွေလိုက်စားခြင်း၏ ရည်မှန်းချက်နှင့် ၎င်းတို့ အတုခိုးရသည့် အရာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပေါလုနှင့်ပတ်သက်သော ဤအဖြစ်အပျက်သည် ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်သောသူတိုင်းအတွက် သတိပေးချက်တစ်ခုအဖြစ် အသုံးဝင်သည်၊ ယင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် အထူးသဖြင့် ကောင်းစွာပြုလုပ်ပြီးပြီဟု ခံစားရသည့်အခါ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့သည် အချို့သောအရာ၌ အထူးသဖြင့် အထုံပါရမီရှိသည်ဟု ယုံကြည်သည့်အခါ သို့မဟုတ် အချို့သောအရာ၌ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြောင်းလဲရန် သို့မဟုတ် ကိုင်တွယ်ခံခြင်းခံရရန် မလိုအပ်ကြောင်း ထင်ရသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုအရာ၌ မိမိကိုယ်ကိုယ် ဆင်ခြင်ရန်နှင့် ပို၍သိနားလည်ရန် ကြိုးပမ်းသင့်လေသည်၊ ဤသည်မှာ အရေးပါလှသည်။ ဤသည်မှာ သင်တို့ကိုယ်တိုင်၏ ကဏ္ဍများ၌ ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သည့်အရာတစ်ခုခု အမှန်တကယ်ပါရှိသည် မပါရှိသည်ကို သိမြင်ဖို့အလို့ငှာ သင်အောင်မြင်စွာ ပြုလုပ်ပြီးပြီဟု ထင်သည့်ကဏ္ဍများကို သင် အသေအချာတူးဖော်ခြင်း၊ အာရုံစိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ခွဲခြမ်းလေ့လာခြင်း မပြုခဲ့သေးခြင်းကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
၈၂။ လူတွေက မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် သဘာဝများကို နားလည်ပုံနှင့် ဘုရားသခင်က လူ့သဘာဝကို ထုတ်ဖော်ပုံတို့ကြားတွင် ကြီးမားသော ကွာဟချက်ရှိလေသည်။ လူတို့သည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်သဘာဝဗီဇအကြောင်းကို သိသောအသိမှာ အပေါ်ယံဆန်လွန်းပြီး ယင်းအသိသည် ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်ခြင်းနှင့် ထုတ်ဖော်ခြင်း နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့် လွန်စွာကွဲပြားခြားနား၏။ ဤသည်မှာ ဘုရားသခင် ထုတ်ဖော်သောအရာထဲမှ အမှားအယွင်းတစ်ခု မဟုတ်ပေ၊ အမှန်မှာ လူသားမျိုးနွယ်သည် သူ၏သဘာဝဗီဇအကြောင်း လေးနက်သောသိနားလည်မှု ကင်းမဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ လူတို့၌ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အခြေခံကျသော သို့မဟုတ် အဓိကကျသော သိနားလည်မှု မရှိကြပေ၊ ထို့ထက် သူတို့သည် သူတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် အပြင်ပန်းဖော်ပြချက်များအပေါ် အာရုံစိုက်၍ သူတို့၏စွမ်းအားကို မြှပ်နှံထားကြသည်။ အကယ်၍ လူတစ်ဦးက သူ့ကိုယ်သူ သိနားလည်သည့်အကြောင်း တစ်ခုခုကို ရံဖန်ရံခါ ပြောခဲ့လျှင်လည်း ၎င်းမှာ အလွန်လေးနက်မည် မဟုတ်ချေ။ ဤကဲ့သို့သောအရာမျိုးကို ပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့် သို့မဟုတ် တစ်ခုခုကို ထုတ်ဖော်ထားပြီးဖြစ်ကြောင့် သူသည် ဤကဲ့သို့သောလူစားမျိုးဖြစ်ကြောင်း သို့မဟုတ် ဤကဲ့သို့သော သဘာဝဗီဇမျိုး ရှိကြောင်းကို မည်သူကမျှ တစ်ခါမျှ တွေးဖူးကြမည် မဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်သည် လူသားတို့၏သဘာဝဗီဇနှင့် အနှစ်သာရကို ထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်၊ သို့သော်လည်း လူတို့သည် သူတို့၏ ပြောပုံဆိုပုံနှင့် လုပ်နည်းကိုင်နည်းတို့မှာ အားနည်းချက်ရှိကြောင်းနှင့် မပြည့်စုံကြောင်းကို နားလည်ကြ၏၊ ထို့ကြောင့် သမ္မာတရားကို လက်တွေ့ကျင့်ဆောင်ရန်မှာ လူတို့အတွက် အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်ရသော အလုပ်တစ်ခု ဖြစ်လေသည်။ လူတို့က သူတို့၏ အမှားများမှာ ၎င်းတို့၏ ဗီဇသဘာဝ ထုတ်ဖော်ချက်များ မဟုတ်ဘဲ အမှတ်တမဲ့ ထွက်ပေါ်လာသည့် ခေတ္တခဏမျှဖြစ်သော သရုပ်သကန်များသာ ဖြစ်သည်ဟု ထင်ကြသည်။ မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ် ဤသို့ ယူမှတ်သောလူတို့သည် သမ္မာတရားကို လက်တွေ့မလုပ်ဆောင်နိုင်ကြ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သမ္မာတရားအား သမ္မာတရားအဖြစ် သူတို့ လက်မခံနိုင်သကဲ့သို့ သမ္မာတရားကို ဆာငတ်ခြင်းမရှိကြသောကြောင့် ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် သမ္မာတရားကို လက်တွေ့ကျင့်ဆောင်သည့်အခါ သူတို့သည် နည်းလမ်းများကို ဝတ်ကျေတမ်းကျေ လိုက်နာကြသည်။ လူတို့က သူတို့၏ သဘာဝဗီဇများမှာ အလွန်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည်ဟု မရှုမြင်ကြချေ၊ ပြီးလျှင် ၎င်းတို့ ဖျက်ဆီးခံသင့်ဖို့ သို့မဟုတ် အပြစ်ပေးခံသင့်ဖို့ ၎င်းတို့ သိပ်မဆိုးကြဟု ယုံကြည်ကြလေသည်။ ရံဖန်ရံခါ လိမ်ညာသည်မှာ သိပ်အရေးမကြီးဟု ၎င်းတို့ ထင်ကြပြီး၊ ၎င်းတို့ကိုယ်၎င်းတို့ ယခင်ကထက် များစွာပိုကောင်းကြသည်ဟု ထင်မှတ်ကြသည်။ သို့သော်လည်း စံနှုန်းများအရဆိုသော် သူတို့သည် သမ္မာတရားကို အမှန်တကယ် လက်တွေ့မကျင့်ဆောင်ကြသောအခါ၌ လူတို့၌ အပြင်ပန်းအားဖြင့် သမ္မာတရားကို မချိုးဖောက်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များအချို့သာ ရှိသောကြောင့် အမှန်ဆိုလျှင် ကြီးမားသော ကွာခြားမှုတစ်ခု ရှိပေ၏။
ခရစ်တော်၏ပြောဆိုချက် မှတ်တမ်းများ စာအုပ်ထဲရှိ “ဗီဇအကြောင်း သိနားလည်ခြင်းနှင့် သမ္မာတရားကို လက်တွေ့ကျင့်ဆောင်ခြင်း” မှ
၈၃။ လူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ အမှုကို တွေ့ကြုံရပြီး သမ္မာတရားကို ရရှိပြီးသည်အထိ အတွင်း၌ သူတို့ကို ထိန်းချုပ်၍ အုပ်စိုးသည်မှာ စာတန်၏ သဘာဝဗီဇဖြစ်၏။ အတိအကျဆိုရလျှင် ထိုသဘာဝဗီဇကို မည်သည့်အရာက ဖြစ်ပေါ်စေသနည်း။ ဥပမာ၊ သင်သည် အဘယ်ကြောင့် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ရသနည်း။ သင်၏ကိုယ်ပိုင် ရာထူးဂုဏ်ဒြပ်ကို အဘယ်ကြောင့် ကာကွယ်သနည်း။ သင်၏ စိတ်ခံစားမှုများသည် အဘယ်ကြောင့် အလွန် ပြင်းထန်နေသနည်း။ မတရားသော ထိုအရာများကို သင်သည် အဘယ်ကြောင့် ခုံမင်ရသနည်း။ သင်သည် အဘယ်ကြောင့် ထိုမကောင်းမှုများကို ချစ်သနည်း။ ဤအရာများမှာ အဘယ်အရာပေါ်တွင် အခြေခံသနည်း။ ၎င်းတို့သည် အဘယ်အရပ်က လာကြသနည်း။ ဤအရာများအား လက်ခံသည်ကို သင် အဘယ်ကြောင့် အလွန်ပျော်ရွှင်နေသနည်း။ ဤအရာများအားလုံး၏ နောက်ကွယ်ရှိ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ သူတို့၌ စာတန်၏အဆိပ်ပါဝင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ယခုတွင် သင်တို့အားလုံး နားလည်လာကြပြီ။ စာတန်၏အဆိပ်မှာ မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍၊ ယင်းကို စကားလုံးများဖြင့် အပြည့်အဝ ဖော်ပြနိုင်၏။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မကောင်းမှုပြုသူအချို့ကို သူတို့သည် အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့ပြုကြောင်းကို သင်မေးပါက သူတို့က “မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာဖြစ်၏” ဟု ဖြေကြလိမ့်မည်။ ဤတစ်ခုတည်းသောစကားစုက ပြဿနာ၏ တကယ့်အရင်းအမြစ်ကို ဖော်ပြလေသည်- စာတန်၏ တွေးခေါ်မှုစနစ်သည် လူသားတို့၏ အသက်တာများ ဖြစ်လာပြီဖြစ်သည်။ သူတို့သည် အမှုအရာများကို ဤရည်ရွယ်ချက် သို့မဟုတ် ထိုရည်ရွယ်ချက်အတွက် ပြုလုပ်ကြသော်လည်း ထိုသူတို့သည် ယင်းကို မိမိတို့အတွက်သာ ပြုကြခြင်းဖြစ်သည်။ လူခပ်သိမ်းတို့က “မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာဖြစ်၏” ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ဤသည်မှာ ထိုနည်းအတိုင်းပင် ဖြစ်သောကြောင့် “စည်းစိမ်အတွက် ရာထူးနေရာတစ်ခုကို ကာကွယ်ပါ” “မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာဖြစ်၏” ဟူသည့်အတိုင်း လူတိုင်းက မိမိကိုယ်ကိုယ်အတွက်သာ အသက်ရှင်သင့်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း လူခပ်သိမ်းတို့က ထင်မှတ်ကြသည်။ “မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာဖြစ်၏” ဟူသော ဤအရာမှာ လူသား၏အသက်တာနှင့် ဒဿနအမြင်ဖြစ်ပြီး ၎င်းက သူတို့၏ သဘာဝဗီဇကိုလည်း ကိုယ်စားပြုလေသည်။ ဤပြောဆိုချက်မှာ အတိအကျဆိုရလျှင် စာတန်၏ အဆိပ်ဖြစ်ပြီး လူတို့၏ နှလုံးသွင်းခြင်းကို ခံရသောအခါ ၎င်းသည် သူတို့၏ သဘာဝဗီဇဖြစ်လာသည်။ စာတန်၏ သဘာဝဗီဇမှာ ဤနှုတ်ကပတ်တော်များအားဖြင့် ထုတ်ဖော်ခြင်းခံရသည်။ ၎င်းတို့က ယင်းကို လုံးလုံးကိုယ်စားပြု၏။ ဤအဆိပ်သည် လူတို့၏ အသက်တာများဖြစ်လာသည့်အပြင်၊ သူတို့တည်ရှိမှု၏ အခြေခံအုတ်မြစ်နှင့် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသော လူသားမျိုးနွယ်က နှစ်ထောင်ချီ၍ ဤအရာ၏ အုပ်စိုးခြင်းကို မပြောင်းမလဲ ခံလာရပြီသည်။ . စာတန်ပြုသမျှအရာတိုင်းမှာ ၎င်းအတွက်သာပင် ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ဘုရားသခင်ထက် သာလွန်ရန်၊ ဘုရားသခင်ထံမှ လွတ်မြောက်ကင်းကွာရန်၊ ၎င်းကိုယ်တိုင် တန်ခိုးကိုင်စွဲရန်နှင့် ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားသော အရာများအားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်ရန် ဆန္ဒရှိသည်။ ထို့ကြောင့် လူသား၏ သဘာဝဗီဇသည် စာတန်၏ သဘာဝဗီဇဖြစ်သည်။ အမှန်တွင်၊ လူများစွာတို့၏ ဆောင်ပုဒ်များသည် ၎င်းတို့၏ သဘာဝကို ကိုယ်စားပြုပြီး ထင်ဟပ်နိုင်၏။ ယင်းကို လူတို့ ဖုံးကွယ်ရန် မည်သို့ ကြိုးစားပါစေ၊ ၎င်းတို့ လုပ်ဆောင်သမျှတိုင်းနှင့် ပြောသမျှတိုင်းတွင်၊ ၎င်းတို့၏ သဘာဝကို ၎င်းတို့ မဖုံးကွယ်နိုင်ကြ။ အမှန်တရားကို ဘယ်သောအခါမျှ မပြောဘဲ ဟန်ဆောင်ကောင်းသောသူ အချို့ရှိ၏၊ သို့သော် အခြားသူများက ၎င်းတို့နှင့် တစ်ခဏကြာ အပြန်အလှန်ဆက်ဆံပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ ၎င်းတို့၏ လှည့်ဖြားတတ်သောသဘာဝနှင့် ၎င်းတို့၏ အလျှင်းမရိုးဖြောင့်မှုကို မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ အချိန်က ခပ်သိမ်းကို ပြောပြလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့ကို အချိန်ကာလတစ်ခု သိရှိပြီးနောက်တွင် ၎င်းတို့၏ သဘာဝဗီဇမှာ ဖော်ထုတ်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ အခြားသူတို့က ဤသို့ ကောက်ချက်ဆွဲကြ၏- ထိုလူသည် ဘယ်သောအခါမျှ မှန်သည့်စကား တစ်လုံးမျှ မပြောသကဲ့သို့ လှည့်ဖြားတတ်၏။ ဤထွက်ဆိုချက်သည် ထိုသို့သော လူတစ်ဦး၏ သဘာဝနှင့်ဆိုင်သော အမှန်တရားပင်ဖြစ်သည်။ ယင်းမှာ ၎င်းတို့၏ သဘာဝနှင့်ဆိုင်သော သက်သေခံချက်နှင့် သာဓကတစ်ခုဖြစ်လေသည်။ ၎င်းတို့၏ ဘဝဒဿနမှာ မည်သူ့ကိုမျှ အမှန်တရား မပြောရန်ဖြစ်ပြီး၊ မည်သူ့ကိုမျှလည်း မယုံကြည်ရန် ဖြစ်သည်။ လူသား၏ စာတန်နှင့်ဆိုင်သော သဘာဝဗီဇတွင် အတွေးအခေါ် အမြောက်အမြား ပါဝင်သည်။ သင်သည် တစ်ခါတစ်ရံ သင်ကိုယ်တိုင် ယင်းကို သတိပင်မထားမိဘဲ နားမလည်သည့်တိုင် သင့်ဘဝ၏ တဒင်္ဂတိုင်းသည် ယင်းအပေါ် အခြေခံလေသည်။ ထို့အပြင် ဤအတွေးအခေါ်မှာ အတော်အတန်မှန်ကန်ပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည့်အပြင် မမှားယွင်းပါဟု သင်ထင်သည်။ စာတန်၏ အတွေးအခေါ်သည် လူတို့၏ အမှန်တရားဖြစ်သွားပြီး သူတို့သည် ယင်းကို စိုးစဥ်းမျှပင် အတိုက်အခံ မလုပ်ကြဘဲ စာတန်၏ အတွေးအခေါ်နှင့်လုံးဝအညီ အသက်ရှင်နေကြသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် သူတို့၏ စာတန်နှင့်ဆိုင်သော သဘာဝဗီဇကို အဆက်မပြတ် ထုတ်ဖော်နေကြပြီး သူတို့သည် ကဏ္ဍအားလုံးတွင် စာတန်နှင့်ဆိုင်သော အတွေးအခေါ်အားဖြင့် အသက်ရှင်လျက်ရှိ၏။ စာတန်၏ သဘာဝဗီဇသည် လူသား၏ အသက်တာဖြစ်သည်။
ယခင်က：(၅) သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်ကို နားလည်ခြင်းနှင့် နတ်ဆိုးများ၏ အလုပ်ကို ပိုင်းခြားသိမြင်ခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်သည့် နှုတ်ကပတ်တော်များ
နောက်တစ်ခုသို့：(၇) ရိုးသားသော လူတစ်ဦး မည်သို့မည်ပုံ ဖြစ်ရန် နှင့် ပတ်သက်သည့် နှုတ်ကပတ်တော်များ